Peaceoftrust's Likes - Myanmar Network
Back to Peaceoftrust's Page
ဆရာတွေအကြောင်း ဆရာတွေအကြောင်း … ရေးသားသူ - - ခင်နှင်းစိုး လူတွေဟာ သူတို့စိတ်ဓါတ်ပေါ် မူတည်ပြီး ပြောဆို ဆက်ဆံ ပြုမူတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်မလုပ်သက် ဆယ့်သုံးနှစ်ကျော်မှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အမျိုးမျိုး ရှိခဲ့တယ်။ စည်းကမ်းမဲ… Discussion ဆရာတွေအကြောင်း 43 Likes မှားတတ်တဲ့အမှားများ [Zawgyi]အင်္ဂလိပ်စာဟာမိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဗမာလိုတွေး၊ မိခင်ဘာသာ လိုတွေးပြီး အင်္ဂလိပ်လိုပြောရာရေးရာမှာ သူတို့နားထဲ ကန့်လန့်ဝင်သွားတဲ့စကားတွေရှိပါတယ်။ သဒ္ဒါအမှားမဟုတ်သော်ငြားလည်း သူတို့ပြောလေ့… Discussion မှားတတ်တဲ့အမှားများ 132 Likes
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Look… Look! (ဒီမှာ) ဒီမှာ look! ကို တစ်စုံတစ်ယောက်အား သင်ပြောမည့်အကြောင်းအရာကို အာရုံစိုက်စေလိုသည့်အခါ အသုံးပြုပါသည်။ အများအားဖြင့် ထိုသူနှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သည့်အခါတွင် အသုံးပြုပါသည်။ Look!… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Look… 70 Likes